तिथि मेरो पत्रु » साना माया देखाउँछ कसले एक केटी तिथि लागि कसरी
तपाईं सानो स्नेह देखाउँछ एक केटी डेटिङ गर्दै भने तपाईं तौलिया मा फेंक प्रलोभनमा पर्न सक्छन्. तपाईंले सधैं यस्तो स्यावालागी रूपमा शारीरिक सम्पर्क प्रारम्भ गर्न एक हुन सक्छ, cuddling, वा चुंबन. त्यो आफ्नो प्रदर्शित स्नेह स्वीकार्दा छ, जबकि, त्यो आफ्नै यी हाउभाउ शुरुवात असहज देखिन्छ. तपाईं आफ्नो मिति देखि यो पत्ता छ र यो तपाईं समस्याहरूको भने, आफ्नो सम्बन्ध अनावश्यक तनाव जोगिन अब कारबाही.
तपाईंको चित्त वर्णन
यो उनको व्यवहार तपाईं कसरी असर गर्छ आफ्नो प्रेमिका आफ्नो मन पढ्न सक्दैन र कुनै विचार हुन सक्छ भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ. वैवाहिक विशेषज्ञ, डा. करेन शेरमेन यो तपाईं कस्तो महसुस आफ्नो प्रेमिका बताउन महत्त्वपूर्ण छ भनेर जोड दिन्छ. सायद, उनको unaffectionate व्यवहार तपाईं अस्वीकार महसुस छोडेको छ, उनको देखि टाढा, निराश, वा गलत. जेसुकै होस् यो छ, एक गम्भीर छलफल लागि छुट्याइएको उनको पुल र उनको कार्य तपाईं कसरी असर आवाज.
प्रतिक्रिया लागि सोध्नुहोस्
के तपाईं हैरान पार्यो के गर्न जागरूकता ल्याएको पछि, यो गहिरो खन्न समय छ. आफ्नो प्रेमिका गरेको व्यवहार को जड पहिचान गर्न मद्दत गर्न प्रश्न. त्यो जो उनको मिति स्नेह को धेरै आवश्यक थिएन अघिल्लो सम्बन्धमा भएको हुन सक्छ. यसबाहेक, आफ्नो सम्बन्ध अझै पनि एकदम नयाँ हो भने, त्यो तपाईं गरम गर्न धेरै समय आवश्यकता र सम्बन्ध माग सक्छ. तपाईं को दुई स्नेह उनको कमी लागि सम्भव कारण औंल्याइदिए एक पल्ट, तपाईं को दुवै बुद्धिशीलता तरिकामा आफ्नो आवश्यकता भेट हुन सक्छ.
सम्झना, के तपाईं स्वाभाविक रूप देखि आउछ तरिकामा आफ्नो प्रेमिका गर्न भावना व्यक्त गर्नुपर्छ, उनले तिनीहरूलाई यस्तै छैन भने पनि. आफ्नो लेखमा "उच्च स्नेही मान्छे को 10 अभिलक्षण", डा. Kory फ्लोइड यस्तो उच्च आत्म-सम्मान भएको स्नेह देखाउने थुप्रै लाभ सूचीकृत गर्दछ, आत्मीयता कम डर, र तनाव देखि ठूलो दृढताको. यसबाहेक, अनुसन्धानकर्ताहरूले अन्द्रियास Gulledge, मिशेल Gulledge, र रबर्ट Stahmann शारीरिक स्नेह दुवै साझेदार लागि सम्बन्ध सन्तुष्टि बढ्छ भनी देखाउनुभयो. स्नेह आफ्नो प्रेमिका नहुनु बावजुद, स्नेह प्रदर्शन गर्न आफ्नो खुलापन यी सकारात्मक परिणाम मा अधिकतम र भविष्यमा सुधार सम्बन्ध छ गर्न अनुमति दिन्छ.
तपाईं भन्ने महसुस हुँदा एक बुँदा आउन सक्छन्, आफ्नो प्रेमिका सबैभन्दा प्रयासको बावजूद, तपाईं अझै पनि सम्बन्ध मा असन्तुष्ट छन्. डा. Sherman कुनै सम्बन्ध मा एक महत्वपूर्ण कारक एक अर्काको मतभेद स्वीकार गर्न सिक्नु हो कि भन्छन्. तपाईं स्नेह आफ्नो प्रेमिका नहुनु तपाईं चिन्ता जारी पत्ता भने, यो cordially सम्बन्ध अन्त र स्नेह लागि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने कुनै पाउन सबै भन्दा राम्रो हुन सक्छ.